Iindaba-u-Hebei Yidong Carbon Products Co, Ltd. uqalile ngokusesikweni umasifundisane omtsha wokubala nge-Okthobha ye-18, 2020.
U-Hebei Yidong Carbon Products Co, Ltd. uqalile ngokusesikweni umasifundisane omtsha wokubala nge-Okthobha ye-18, 2020.
Iimveliso zeCarbon Yidong Carbon Co., Ltd.ngumvelisi wee-electrode ze-graphite zobungcali. Oko kwasekwa isityalo esitsha, usihlalo webhodi ngokobuqu wakhokela uyilo kunye noyilo, ukongamela kunye nolawulo. Okokugqibela, ulwakhiwo lwezityalo lwagqitywa ngokufanelekileyo.Umzi mveliso omtsha ubekwe eShangcheng Industrial Park, eCheng'an County, kwisiXeko saseHandan, kwiPhondo lase-Hebei. Imelene neJinan Port empuma, iTianjin Port emantla, iikhilomitha ezi-3 kude nendlela ekhawulezileyo. Kwaye ikufutshane ne-S315 kuHola wendlela wePhondo. Inokuthuthwa okufanelekileyo kunye nokugqwesa kwindawo yejografi.
Umzi mveliso omtsha ugubungela indawo ye-18,000 yeemitha zesikwere. Kukho ulwakhiwo lweofisi, ilabhoratri, igumbi lempompo, iworkshop yokubala, iworkshop yokubumba, iworkshop yoomatshini, indawo yokusebenzela ekrwada, indawo yokugcina imveliso, igumbi lokumitha, kunye nocweyo lolawulo lwezithuthi kwindawo yefektri. Izixhobo zokuqala-class kunye nobuchwepheshe obugqwesileyo kummandla mveliso omtsha .Kwangelo xesha imeko mveliso ucocekile kwaye ucocekile, ohlangabezana ngokupheleleyo nemigangatho yesizwe. Umthamo wemveliso yonyaka wesityalo esitsha unokufikelela kwiitoni ezingama-26000, ezinokuvelisa i-RP / HP / UHP grafite electrode, iigrafiti zeetyhubhu, iigraphite zecrafite, iintlobo ezikhethekileyo zeemveliso zegraphite njl Ngelizwi elinye, unokufumana iimveliso ozifunayo apha.
Isityalo esitsha se-graphite electrode sixhotyiswe ngolawulo olomeleleyo kunye neqela lezobuchwephesha, ezineenkqubo zolawulo olungqongqo kunye nemigangatho yomgangatho. Bakulungele ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neyona nto intle yokuthengisa kunye neenkonzo zentengiso yasemva kokuthengisa kubathengi
Iimveliso zecarbon zecarbon Yidong Co., Ltd.is ihlala ihambelana nophuhliso lweshishini le-graphite electrode, ibambelela kumxholo wophuhliso lwenzululwazi kunye nengcinga ejolise ebantwini, sizama ukuba lishishini elihle, sithathe amathuba amatsha kwaye sihlangabezane nemiceli mngeni emitsha. Iimveliso zekhabhoni ze-Hebei Yidong Co, Ltd. ziya kukhwela isaqhwithi kumzi mveliso we-graphite electrode wamazwe aphesheya kwaye ziqhubele phambili!
Wamkelekile ukuba utyelele umzi mveliso omtsha weHebei Yidong iimveliso zekhabhoni Co., Ltd. Siza kukubonelela ngentshiseko ephezulu! Jonga phambili ekufikeni kwakho!